Fifandonana tany Miandrivazo : Zandary iray namoy ny ainy -
AccueilSongandinaFifandonana tany Miandrivazo : Zandary iray namoy ny ainy
Tafakatra telo ny isan’ireo zandary namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny asany tamin’iny herinandro iny. Ankoatra ireo roalahy lavon’ny balan’ny dahalo tany amin’ny kaomina Bekofafa, distrikan’i Befotaka, ny 29 mey lasa teo mantsy, dia zandary mitondra ny grady G2C iray hafa indray, izay miasa ao min’ny “Poste avancé” any Isalo no maty notifirin’ny malaso teo amin’ny firihifany, ny faritry ny vatany ary ny tongony. Teo amin’ny kizo iray tany Behoro, fokontany Masiakampy, Kaominina Anosimena, distrikan’i Miandrivazo no nitrangan’izany ny sabotsy 02 jona lasa teo tokony ho tamin’ny 04 ora maraina. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia nanao fanarahan-dia niaraka tamin’ireo fokonolona ity mpitandro filaminana ity sy ny namany tamin’io fotoana io, taorian’ny nitrangan’ny halatr’omby nataona dahalo miisa manodidina ny 20 tany an-toerana. Ny zoma tamin’ny 11 ora alina ireo olon-dratsy nirongo basim-borona ireo no tonga nanafika ny tanàna, ary nandroaka ireo omby miisa 35.
Vantany vao lasa niaraka tamin’ireo biby fiompy ireo dahalo, dia nanara-dia avy hatrany ihany koa ireo fokonolona, ka teo amin’ny 200 metatra niala ny toerana nisehoan’ny asa ratsy no nisian’ ny fifandonana voalohany. Namoy ny ainy nandritra izany ny iray tamin’ireo mpanara-dia. Noho izay zava-nisy izay, dia nanapa-kevitra ny hampandre ireo manam-pahefana tao Isalo, 5 kilometatra miala eo amin’ity distrika ity ireo andian’olona. Tonga tany an-toerana ireo zandary fotoana vitsy taorian’izay, ka dia nitohy ny fanenjehana ireo dahalo ny andron’ny sabotsy vao mangiran-dratsy. Efa tazan’ireo mpanara-dia ireo malaso nampita ireo omby tamin’ ny reniranon’i Tsiribihina tamin’ny alalan’ny lakana. Vao nahita ireo zandary sy ireo fokonolona koa anefa ireto farany dia nanao tifitra variraraka, ka raikitra indray ny fifanandrinana. Nivadika ny rasa, ka malaso miisa manodidina ny enina no voan’ny balan’ireo mpanara-dia, ary latsaka tany anaty rano avy hatrany. Tafita ny rano ary tafaporitsaka niaraka tamin’ireo omby kosa ireo namany. Mba ahafahana manohy ny ady efa natomboka moa, dia nidina teo amoron-drano haka lakana hiampitana ireo fokonolona sy ny mpitandro filaminana, ka tamin’izany indrindra no mbola nisy dahalo roalahy niafina tao anaty lobolobo, nitifitra ary izao nahalavoana zandary iray izao.
Fanirisoa Ernaivo : Hiady amin’ny hosoka eto amin’ny firenena “Fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko?…”. Io teny notsongaina tamin’ny tenin’ny soratra masina tao amin’ny Estera 8,6, io no entin’ny kandidà laharana ...Tohiny